Isku aadka Quarter-Final ka Europa League oo la xaqiijiyay | Dusta News
Home > General > Isku aadka Quarter-Final ka Europa League oo la xaqiijiyay
August 7, 2020 August 7, 2020 Dusta News322Leave a Comment on Isku aadka Quarter-Final ka Europa League oo la xaqiijiyay
Waxaa laga yaabaa inay bilaabatay sanad ka hor, laakiin tartanka 2019/20 Europa League wali xoog ayuu u socdaa. Ma ahan kaliya sababta waa tartan aad u dheer, laakiin duruufaha ayaa ah kuwa aan ku qasbanahay inaan waqti yar ka sugno ciyaaraha kubbada cagta Yurub waqtigaan.
Dhacdo layaableh, wareega 16ka ayaa hada inaga dhamaaday, iyadoo sideed koox ay u hadheen inay u tartamaan mid ka mid ah koobabka ugu weyn ee qaarada Europe.
Kahor intaanan u gelin goobta ka hadalka isku aadka, waxaa haboon in aan dib u milicsano qaabka cusub mar kale. Sidaan sidoo kale ku aragnay Champions League-ga, dhamaan kulamada halkan laga soo ciyaaray waxaa lagu ciyaari doonaa sidii hore ee isku aadka wareega 16ka. Si loo yareeyo fiditaanka COVID-19 sida ugu badan ee suuragalka ah, goobo dhexdhexaad ah ayaa martigelin doona toddobada kulan ee haray. Waa waxoogaa la mid ah Koobka Adduunka, waana wax weyn.
Semi-finalka Europa League waxaa lagu ciyaari doonaa afar garoon oo ku yaal Jarmalka oo dhan. Waxay kala yihiin: Schalke’s Arena AufSchalke, Koln’s Rhein Energie Stadion, MSV-Arena ee Duisburg iyo Merkur Spiel-Arena ee Dusseldorf.
Asal ahaan, garoonka Gdansk ee Poland waxay ahayd inuu martigaliyo finalka 2020, laakiin taasi waxaa hada loo bedeli doonaa finalka garoonka kooxda Koln ee RheinEnergieStadion, iyadoo finalka xilli ciyaareedka soo socda lagu ciyaari doono Gdansk.
Isku aadka Quarter-Final
Isku aadka ayaa goor horay la sameeyay wareega quarter-finalka, iyadoo natiijooyin isku dhafan ay ka gaareen labada koox ee Premier League.
Wolves ayaa gaartay heerkaan markii ay wadar ahaan labada lug 2-1 kaga soo badiyeen kooxda Olympiakos, halka Manchester United ay iska xaadirisay quarter-finalka ka dib guushii LASK, iyagoo wadar ahaan labada lug 7-1 kaga soo badiyay.
Kulamada rubuc dhamaadka waa:
Monday 10 August: Manchester United vs Copenhagen – RheinEnergieStadion
Monday 10 August: Inter vs Bayer Leverkusen – Dusseldorf Arena﻿
Tuesday 11 August: Shakhtar Donetsk vs Basel – Arena AufSchalke
Tuesday 11 August: Wolves vs Sevilla – MSV Arena
Jadka loo marayo ilaa Final-ka
Sida aan kor ku soo xusnay, United ayaa isku aadka ugu sahlan soo martay marka loo eego Wolves. Si kastaba ha noqotee, haddii ay labada kooxba ka guuleystaan ​​kooxaha ay la kala ciyaarayaan, markaa waxay xaqiijineysaa ugu yaraan hal koox oo Ingariis ah inay u tartami doonaan finalka Europa League madaama ay labadooda isku wajihi doonaan Semi final-ka.
Taasi, dabcan, waxay la micno tahay in kooxdii guuleysata Inter iyo Leverkusen ay la ka hor imaan doonto midkood Shakhtar Donetsk ama Basel semi final-ka.
Iyada oo wareega quarter-finalka uu dhacayo 10/11 August, ma jirto wax u haray kooxaha ka haray tartanka iyadoo qaabkan cusub uu hadafkiisu yahay in la soo gabagabeeyo tartanka sida ugu dhaqsaha badan si loogu helo waqti ku filan oo kooxaha si ay ugu diyaar garoobaan xilli ciyaareedka soo socda.
Taas micnaheedu waa labada koox ee gaara semi-finalka waxay heystaan ​​kaliya lix maalmood oo ay ku diyaar garoobaan, iyadoo xitaa waqti ka yar ay heystaan ka hor finalka inta uu dhacayo.
Semi-final goorta la ciyaarayo iyo goobta:
Sunday 16 August: Wolves / Sevilla vs Manchester United / Copenhagen – Stadion Koln
Monday 17 August: Inter / Leverkusen vs Shakhtar Donetsk / Basel – Dusseldorf Arena﻿
Final-ka goorta la ciyaarayo iyo goobta:
Friday 21 August: Winner of first semi-final vs Winner of second semi-final – Stadion Koln
QM ayaa sheegtay 200,000 oo Qof in ay Ku Barakaceen Fatahaadaha
Sanator Muuse Suudi oo Dalbaday si dhab ah Baaris loogu Sameeyo Xasuuqii Ka Dhacay Gololeey